जनप्रतिनिधिले जनताको मन जित्न सकेनन् – Dainik Lumbini
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) का पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर गोविन्द पोख्रेल प्यूठान जिल्लामा जन्मिए । उनमा विभिन्न सरकारी संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा १० वर्षभन्दा बढी प्रत्यक्ष व्यवस्थापनको अनुभव छ र शिक्षामा २० वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ ।
उनले दक्षिण एसियाका विभिन्न स्थानहरूमा एसएनभी नेदरल्याण्ड विकास संगठनमा प्रबन्धकको रूपमा तीन वर्ष सेवा गरे । उनको नेतृत्वमा नेपाल सरकारको वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई नेपालमा नवीकरणीय उर्जा प्रवद्र्धनको केन्द्र बिन्दुका रुपमा मान्यता दिइयो र देशमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच बढ्यो । डा.गोविन्दराज पोख्रेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपालको इञ्जिनियरिङ इन्स्टिच्युट संस्थान, औद्योगिक र मेकानिकल इञ्जिनियरिङ विभागमा प्राध्यापक पनि थिए ।
उसले दिगो ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, उर्जा नीति, र नवीकरणीय उर्जा प्रविधि र वित्तीय सम्बन्धमा प्राविधिक पक्षहरूको बारेमा धेरै अनुसन्धान गरे । पछिल्लो समय नेपाली कांगेसबाट राजनीतिमा होमिएका पोख्रेलसंग दैनिक लुम्बिनी प्यूठानका संवाददाता राधिका भुसलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि प्यूठान जिल्लामा तपाईको भूमिका कस्तो छ ?
म निर्वाचनमा पराजित भएता पनि म नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार भएको र प्यूठानका झण्डै ३१ हजार तीन सय जति मतदाताले मलाई मत दिनु भएको थियो । म निर्वाचन सकिएको दोस्रो दिनदेखि पार्टीका नेतागण, अग्रजहरु, जिल्ला, पालिकाका र वार्डका पदाधिकारिहरु साथै साथिहरुसंग प्यूठानी जनताका घर दैलोमा पुगेको छु । निर्वाचन पछि ६४ वाडमध्ये ६२ वाडमा म पुगि सकेको छु । धेरै वाडमा त पटक–पटक जनताको घर दैलोमा दुःखसुख बाँड्न पुगेको छु । म जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छु जनताको साथमै रमाएको छु ।
चुनाव पराजय पश्चात जिल्लाको विकास निर्माणमा तपाईंको योगदान के छ ?
जनताका विकासका काम र व्यक्तिगत समस्याहरुलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सहजीकरण र सके समाधान गर्ने प्रयास गरेको छु । जिल्लाका विभिन्न विकास निर्माणका कुरालाई लिएर प्रदेश र केन्द्रसम्म विभिन्न ठाउँमा पहल गरेको छु पार्टीको नेतृत्वसंग समन्वय गरेर । स्वर्गद्वारी मन्दिर निर्माण, जिल्लाका विभिन्न ठाउँका बाटाघाटा र पुल निर्माणको लागि थप बजेटको पहल गरिरहेको छु ।
बाग्दुला–भिमगिठे सडकमा निर्वाचित साथीहरुले ध्यान दिएर पहल नगरी दिँदा अन्योलमा छ र निर्माणमा जाने प्रक्रिया ठप्प छ । त्यसकालागि सहयोग गर्ने राष्ट्रदेखि विभिन्न मन्त्रालयमा घचघच्याउने र सहजिकरण गर्ने काम गरेको छु ।
प्यूठानका जनप्रतिनिधि तथा जनताबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
विभिन्न आश्वासन बाँडेर निर्वाचित भएपछि हाम्रा जनप्रतिनिधिले जनताको मन जित्न नसकेको देखेको छु । स्थानीय तहका केही ठाउँमा राम्रो काम भएको छ तर केही ठाउँमा विपक्षी पार्टीका कार्यक्रर्तालाई शिफारिससम्म पनि नदिने निकै तुक्ष्य कार्य समेत गरेको पाइएको छ । प्रदेश र संघमा निर्वाचित हुनु भएका साथीहरुले त जिल्लामा त्यस्तो कुनै नयाँ योजना, आयोजना सुरु गरेको देखेको छैन र धेरै जनतासंग उहाँहरु सम्पर्कमा नभएको भन्ने गुनासो जनताको घरदैलोमा जाँदा सुनिन्छ ।
तपाईंको सक्रियतामा हालसम्म प्यूठान जिल्लामा के–कस्ता पूर्वाधार निर्माण भएका छन् त ?
मैले पहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा योजनामा राखेका सडक र पुल बाहेक प्यूठान जिल्लामा स्थानीय सडक बाहेक प्रदेश स्थारीय र केन्द्रीय योजना खासै परेको देखिएको छैन । म निर्वाचनमा हारे पनि ति परेक योजनाहरुलाई निर्माणको गति दिन र आवश्यक बजेट जुटाउन पहल गरेको छु ।
विद्यार्थीहरुलाई झोला र स्टेशनरी, कम्युटर, सदरमुकाममा ढुङ्गे धारा बनाउने, आगलागीबाट विपतमा परेका परिवारलाई जस्तापाता उपलब्ध गराउने, विद्यालयलाई कम्प्युटर जुटाउने, जिल्ला अस्पताललाई ३५ थान बेडको सामग्रीको व्यवस्था, दुर्गम ठाउँका केही विद्यालयालाई स्वयम्सेवी शिक्षक र विद्यालया निर्माणका लागि सिमेन्टलगायतको व्यवस्थापन गरेको छु, अवश्य पनि यी कार्य विभिन्न संघसंस्था र साथीभाइहरुसंग सहयोग परिचालन गरेर गरिएको छ ।
कम्युनिष्टको लालकिल्ला मानिने प्यूठानमा तपार्इंले काठमाडांै बसेर पनि राम्रै भोट पाउनु भएको थियो । अहिले ति मतदाताहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
म काठमाडौं बसे पनि जिल्लाका कुनै नेतभन्दा कम जनताको घर दैलोमा पुगे छैन । साथै प्रतिपक्षमा भए पनि जनताका पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्ने सरकारवाला साथीहरुले भन्दा बढी पहल गरेको छु जस्तो लाग्छ । हुन त यो जनताले महसुस गर्ने कुरा हो । जहाँसम्म लाग्छ प्यूठानी जनताहरुले कम्युनिष्ट नेताहरुका झुठा बाचा, काल्पनिक दर्शन, संकृण विचार र ढोगी व्यवहारलाई राम्रोसंग बुझेका छन् । प्यूठानी जनतालाई कर्मशिल बनाउन, उनीहरुले गरिखाने विकासको माहोल सिर्जना गर्न कसले सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न केही समय लागे पनि अब स्पष्ट भैसकेको छ ।
त्यसैले जसरी अघिल्लो निर्वाचनमा प्यूठानीले नेपाली कांग्रेसलाई धेरै मत दिएर उत्साह भरिदिएका थिए अब आउने निर्वाचनहरुमा अझ बढी विश्वास गरेर नेपाली कांग्रेसलाई अझ सशक्त बनाउने छन् र विजय गराउने छन् भन्ने आशा एवं अनुरोध गर्दछु ।
हिजोआज जिल्लातिर तपार्इंको दौडधुप बढेको छ । के चुनावको तयारी हो ?
होइन । म र नेपाली कांग्रेसका नेतागण र साथीहरु वर्षै भरी गाउँमै जाउँ गाउँमै रमाउँ अभियान चलाएर जनताका बस्ती बस्तीहरुमा पुगेका छौं र यस कदमलाई हामीले निरन्तरता दिएको मात्र हो ।
देशलाई सही मार्गमा लैजाने काम राजनीतिक दल र नेतृत्वको हो । यदि हामीले हाम्रा नातिनी, नाति, छोरी र छोराहरुलाई स्वाभिमान भएर यही देशमा गरिखाने माहोल भएको देख्न चाहाने हो भने सबैले सही नेतृत्व, सही राजनीतिक दर्शन बोकेको पार्टीलाई रोज्नु पर्छ ।
हामी सबैले संकृणता त्यागि एकआपसमा मिलेर समाज, जिल्ला र देश बनाउनु पर्छ । सबैले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ त्यागेर गाउँ, जिल्ला र देशलाई प्राथमिकतामा राखि दल र नेतृत्व रोज्ने संस्कारको विकास गर्नु पर्छ ।
नाइट क्लबमा भेटिएका फुटबलरलाई एन्फाले राष्ट्रिय टिमबाट हटायो
कोरोनाको क्षति न्युनिकरणमै सरकारको जोड-प्रा. डा. ईश्वर गाैतम